Iinkqubo ezili-10 eziPhambili zeAutism kwiZikolo zikaRhulumente 2022
January 23, 2022 UAdaeze Nwachukwu
Iinkqubo ezili-10 eziPhambili zeAutism kwiZikolo zikaRhulumente
Abantwana abane-Autistic bafanelwe kokona kulungileyo, yiyo loo nto silakhele eli nqaku leenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente. Ungafuna ukuthathela ingqalelo ukubhalisa umntwana wakho kwinqanaba leASD kuso nasiphi na isikolo.
Abantwana abane-autism bafuna ingqalelo ekhethekileyo kootitshala kwaye oku kuyafumaneka ezikolweni. Izikolo zikarhulumente zinelayisensi yokubonelela ngeenkonzo ezizodwa kubantwana abane-autism, ukuhlangabezana neelebheli zabo zokuqonda isifo, unyango kunye nemfundo.
I-Autism iya isanda njengoko iminyaka iqengqeleka kodwa kusekho ukungaqondi kakuhle malunga nesi sifo esenza kube nzima ukukhetha esona sikolo sibalaseleyo somntwana one-autism.
Kukholelwa ukuba ukubeka umntwana one-autistic kwisikolo sikarhulumente kuza nezithintelo kuba kunzima ukuziqhelanisa neemfuno ezizodwa zabantwana kwisikolo sikarhulumente, kukho ukunqongophala kokucaciswa kwiimfuno zomntwana kodwa oku kusekho anditsho ukuba izikolo zikarhulumente zibhalelwe abantwana abaphila ne-Autistic Spectrum Disability (ASD).
Zininzi izinto ezinokubangela ukuba babe ngabantwana kubantwana abanesifo sengqondo esenza ukuba kube nzima ukubavumela bafunde kwindawo yemfundo njengabanye abantwana. Abantwana abane-autism beme emngciphekweni ophezulu wokuxhatshazwa kunabantwana abaqhelekileyo ke esona sikolo sihle somntwana one-autistic ayisiyiyo enika umntwana imfundo eyiyeyona igqwesileyo, kodwa ikwayiloo apho umntwana exhaswa ngokuziphatha nangokweemvakalelo.
Ezinye zeenkonzo ezinikezelwa ngokupheleleyo kwisikolo esihle se-autism zezi zilandelayo:
Ukuziqhelanisa nemfundo yoMzimba
Zininzi iinkqubo ze-autism kwizikolo zabucala nezikarhulumente kwaye ukhetho lwayo luxhomekeke kukhetho lwabazali kokulungele umntwana.
Akukho lula ukuza kwisigqibo nangayiphi na imeko kwimeko yesikolo somntwana one-autistic kodwa ezi zikolo zichazwe apha ngezantsi zilukhetho olufanelekileyo kuwe kuba zithembisa ezona nkqubo zibalaseleyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente.
1 Ezona nkqubo zibalaseleyo zeAutism kwiZikolo zikaRhulumente
1.1 1. I-autism Academy yemfundo
1.2 2. Isikolo esikhethekileyo iCamp Hill
1.3 3. IZiko leMfundo loMhlaba wePaka
1.4 4. IiLions Gate Academy
1.5 5. IZiko loLoyiso
1.6 6. Isikolo seForam
1.7 7. Isikolo sentwasahlobo sentliziyo
1.8 8. Khawufane ucinge iAkhademi
1.9 9. Iziko likaCarrie Brazer le-Autism kunye nezinye iindlela, Inc., eMiami
1.10 10. Isikolo saseYeriko
Ezona nkqubo zibalaseleyo zeAutism kwiZikolo zikaRhulumente
I-autism Academy yokufunda
Isikolo esikhethekileyo saseCamp Hill
Isikolo sePaki yoMhlaba
Isikolo sentliziyo sentliziyo
Khawufane ucinge iAkhademi
IiLion gate Academy
IZiko leCarrie Brazer le-Autism kunye nezinye iindlela, Inc., Miami
1. I-autism Academy yemfundo
Isikolo se-autism sokufunda siseToledo, eOhio.
Kukho abanye abakhubazekileyo abahoywayo kwi-academy ngaphandle kwe-Autism. Ke, ngandlela thile, isikolo sinokubonwa njengesikolo esimalunga ne-charter yoluntu esiye safunyanwa sinalo naluphi na uhlobo lwe-autism okanye ukukhubazeka konke konke.
Kwiziko lemfundo, kukho izibonelelo ezaneleyo zezakhono zokuqeqeshelwa umsebenzi, izakhono zolawulo lwemihla ngemihla, kunye nesiseko esiluqilima sokuziphatha nophuhliso oluyimfuneko kakhulu ekukhuleni komntwana. Ugxininiso ekufundeni kwezemfundo esikolweni lomelele kakhulu kwaye abafundi bakhathalelwe ngokufanelekileyo ujikeleze.
Ootitshala banobuchule ekusebenzisaneni okuhle kunye nabafundi kwaye bayaziqonda iimfuno ezisisiseko zomntwana ngamnye njengoko kunokuba njalo. Isikolo sesinye sezikolo ezimbalwa ezibonelela ngeenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente. Ungasindwendwela isikolo website Apha.
2. Isikolo esikhethekileyo iCamp Hill
Isikolo siseGlenn Moore, ePennsylvania, e-USA. Sisikolo esihle sabantwana abane-autistic kunye nabantwana abaphila nokukhubazeka kwengqondo kunye nokukhula ngokusondeleyo kunxulumene ne-autism. Banabaqeqeshi abanezakhono ekuqeqesheni abantwana abane-autistic kwaye bezisa ezona zibalaseleyo kubo.
Iinkqubo zokuhlala kunye nemini ziyafumaneka esikolweni kunye nenkqubo yenguqu kubantu abancinci abaphakathi kweminyaka eyi-18 ukuya kwe-21.
Kudweliswe njengenye yezona zikolo zabucala zibalaseleyo eUnited States ziiMasters kwiMfundo eKhethekileyo. Isikolo saseCamp Hill Special kulula kwizikolo zase-USA ezibonelela ngeenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zabucala nakwizikolo zikarhulumente. Ulwazi oluninzi lunokufumaneka ngokuthe ngqo kwi- Iwebhusayithi yeSikolo.
3. IZiko leMfundo loMhlaba wePaka
ILand Park Academy sesinye sezikolo ezibonelela ngeenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente.
Yinkqubo ebekwe eSacramento, eCalifornia, enikezela ngenkqubo enkulu yemfundo malunga nokuziphatha kunye nophuhliso lomntu kubantu abakwiActism Spectrum.
Basebenza kubantwana abaphantsi kokhathalelo lwabo ukubenza bakulungele kwizikolo zikarhulumente zemveli besebenzisa iindlela zonyango ezahlukeneyo kunye neenjongo zokufunda ezizodwa (IEP). Imirhumo ayifikeleleki. Kutshanje kudweliswe njengesixhobo esaziwayo semfundo sabantwana abaphila neAutism eCalifornia.
Kuyathenjwa kakhulu ukuba amanani e-Land Park Academy njengesinye sezikolo ezibonelela ngeenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente. Ungandwendwela Iwebhusayithi yeSikolo Apha.
4. IiLions Gate Academy
I-Lions gate academy ibonelela ngeenkqubo ezilungileyo kwi-Autism kwizikolo zikarhulumente. Kuyaphawuleka ukunceda abafundi okanye abantwana abane-autism esebenza ngokukuko boyise imiceli mngeni yabo ekukhuleni nasengqondweni.
Isikolo sele sinengxelo engaphezulu kwe-45 kwizinga leZikolo eziBalaseleyo.
Benza ukuba kufumaneke isiCwangciso sezeMfundo esizimeleyo somntu ngamnye (IEP) kunye nesicwangciso sokuFunda ngokuBodwa (i-PLP) ngamanyathelo afanelekileyo enza ukuba abafundi bafumane imfundo eqinileyo edityaniswa nezakhono zobomi bokwenyani zokuzisebenzisa kubomi babo.
Ubunzima bokukhetha isikolo esifanelekileyo se-autism kakhulu kodwa isango leeNgonyama linokugqitywa ngokulula njengesikolo esibonelela ngeenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente. Landela eli khonkco ukutyelela isikolo Website.
5. IZiko loLoyiso
Esi sesinye sezikolo ezibonelela ngeenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente. Ezinye zezinto abazibonelela ngabafundi zinzima kwaye zibanzi, uqeqesho lomntu ngamnye kubantwana abaneminyaka emithathu ukuya kwishumi elinesihlanu.
Isikolo sikhathalele ukufaka iinkqubo eziza kuba luncedo kubafundi kwikharityhulam yesikolo. Kukho izinto ezenziwa liqela elincinci elinceda abantwana ukuba bakhe izakhono zentlalo kunye nezonxibelelwano.
Inqanaba lesakhono sootitshala nabaqeqeshi liphezulu kwaye abantwana bonwabile ngalo lonke ixesha lokuhlala kwabo esikolweni. Tyelela isikolo website Apha
6. Isikolo seForam
Isikolo seforum sisiseko sabantwana abahlala ngaphakathi kwe-autism spectrum. Ime eWaldwick, eNew Jersey.
Ayisosikolo sikarhulumente, kodwa sisikolo sabucala, esizimeleyo esilungiselela abantwana ukuba babe ne-autism kwisikolo sikarhulumente esiqhelekileyo okanye kwisiko lesiqhelo. Yenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zabantwana ukuya kutsho kwiminyaka eyi-16.
Umyinge womfundi-titshala yi-1: 2 kwaye abantwana banikwa ingqwalaselo ebanzi ngokwento abayifunayo kuphuhliso lweenxa zonke. Ikharityhulam ilungiswe ngohlobo lokuba iimfuno zomntwana ngamnye zibandakanywe kwisicwangciso kwaye akukho mntwana ushiyekileyo ukuba asokole.
Uphononongo kwiphepha labo likaFacebook lubonisa impumelelo yesikolo ekwenzeni inkqubela ngokutsiba kunye nemida kwezentlalo, imfundo, kunye nezakhono zobomi. Tyelela isikolo website Apha.
7. Isikolo sentwasahlobo sentliziyo
Isikolo seNtliziyo yeNtwasahlobo sasekwa ngo-1934 eWichita, Kansas, e-US. Yasekwa nguConnie Erbert, iqhawe lebhaso le-Autism ngomsebenzi wakhe wokuzincama wokufundisa kuluntu lwe-autism.
Sesinye sezikolo ezibonelela ngeenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente. Ukufunda entlakohlaza entlanganisweni Isikolo kubandakanya inkqubo yoqeqesho ngeendlela ezininzi apho iingcali zisebenza kunye ukunceda iimfuno zabantwana ngeenkqubo ezisekwe kwigumbi lokufundela nakwindawo yokuhlala. Izikolo zentwasahlobo zentliziyo zamkela abantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kuma-21 isikolo website Apha
8. Khawufane ucinge iAkhademi
Iqela labazali abanenkxalabo lahlangana ukuze bafumane i-Imagine Academy eBrooklyn, eNew York. Aba bazali babefuna ukuzisa indlela emanyanisiweyo kwimfundo yabantwana babo, yiyo loo nto kukho imfuneko yokuqalisa isikolo apho amaphupha abantwana abo enziwa aphile.
Abantwana abane-autistic bafuna ingqalelo ekhethekileyo kunye nesidingo kwaye yile nto kanye i-Imagine Academy ijolise kuyo xa beseka iAkhademi. Kwi-Imagine Academy, iimfuno zomntwana ngamnye zibaluleke kakhulu kwaye ziphathwa ngokukhawuleza.
Esi sikolo sinekharityhulamu ebanzi ejongene nemfuno yabantwana. Umntwana ngamnye unikwa imfundo eyodwa kunye noqeqesho olunzulu kunye noqeqesho kumacandelo emfundo njengokudityaniswa kweemvakalelo, imisebenzi emihle yemoto, unyango lwentetho, ukwakha izakhono zentlalo, kunye nolunye uqeqesho kwezemfundo olufanelekileyo kwinkqubo yabo yophuhliso kunye nokuba sempilweni.
Isikolo sifumene inkxaso-mali kwiNgxowa-mali yamaThuba aBakhubazekileyo eyayibiza ngokuba "liphupha elizalisekayo" labantwana abane-autistic kunye neentsapho zabo. Ndwendwela isikolo website Apha
9. Iziko likaCarrie Brazer le-Autism kunye nezinye iindlela, Inc., eMiami
Iinkqubo ze-Autism kwizikolo zikarhulumente zinqabile, ngokutsho kodwa zisekhona.
Esi sesinye sezikolo ezingenzi nzuzo kunye nesizwe esaziwa njenge-autism eMelika, kanye kanye eMiami. Isikolo sivulelekile kubafundi abakwinqanaba lokuqala, eliphakathi neliphezulu elibonelela ngomthombo omkhulu wenkxaso yabantwana kwi-autism spectrum.
Eli ziko lineengcali ezinelayisensi kunyango lokuthetha, unyango lomsebenzi, unyango lomzimba, njl. Ukukhula, ukufundisa, iimfuno zomntwana.
Kwiimeko ezigabadeleyo, iziko linika abantwana ithuba lokufumana ubudlelwane phakathi kootitshala nomfundi o-1: 1. Abantwana kweli ziko baxhaswa ngokwasemphefumlweni kwaye bakhuselwe kulo naluphi na uhlobo loxinzelelo lwasemphefumlweni, eyenye yeengxaki eziphambili zabantwana abahlala kwiAutism Spectrum.
Iziko leCarrie Brazer le-Autism kunye nezinye iindlela, Inc., iMiami ngokulula sesinye sezona zikolo zibalaseleyo ezibonelela ngeenkqubo ezilungileyo zeAutism kwizikolo zikaRhulumente. Tyelela isikolo website Apha.
10. Isikolo saseYeriko
Yayisungulwa ngabazali kunye noosomashishini baseJacksonville, eFlorida. Ayisosikolo sikarhulumente nangona kunjalo kodwa ilungiselela abantwana kunye nabafundi abahlala ne-autism kwisikolo sikarhulumente esiqhelekileyo okanye i-orb nasiphi na isikolo abasithandayo.
Sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwi-autism e-US kuba ibonelela ngeenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente nakwizikolo zabucala. Esikolweni, kukho ukubonelelwa ngamathuba akhethekileyo ezemfundo yesayensi yabantu abane-autistic kunye nokunye ukuphazamiseka kwengqondo.
Ikharityhulamu ivumela ukuguquguquka kokongezwa kohlalutyo lomlomo kunye nokuziphatha (i-ABA) ukwenzela ukubonelela abafundi ngemfundo eyedwa neyabanzi.
Ikharityhulamu yaseJeriko incede abantu abaninzi be-autistic ukuba boyise iingxaki ze-autistic kwaye emva koko bavelise kwaye bonwabe kubomi babo obahlukeneyo. Sesinye sezikolo eMelika ezibonelela ngeenkqubo ezilungileyo ze-autism kwizikolo zikarhulumente. Kukho ubukho beSicwangciso seMfundo esizimeleyo esinceda umntwana ukuba afezekise iinjongo ezibalulekileyo zomzuzu wangoku nakwiminyaka ezayo. Tyelela isikolo website Apha
Leliphi ilizwe elinezona zikolo zikarhulumente zibalaseleyo ze-autism?
Kulungile, amazwe anendlela yokunceda umntwana one-autistic. Amazwe ahlukeneyo anikezela ngokungaphezulu okanye ngaphantsi ngokubhekisele kwizixhobo kunye nenkxaso yeinshurensi.
Zininzi izinto ekufuneka abazali bazithathele ingqalelo kumntwana oneAutism Spectrum Disorder (ASD), kwaye ukhetho lwendawo yokuhlala luyinxalenye ebalulekileyo yokuqwalaselwa, ngakumbi eMelika.
Sifumanise ukuba la mazwe adweliswe apha ngezantsi alungile ekukhuliseni umntwana one-autistic ngenxa yezixhobo ezikhoyo kunye nezikolo ezinokufikeleleka kula mazwe.
Ngaba iZikolo zikaRhulumente zilungile kwiAutism?
Izikolo zikarhulumente zisenokungabi yinto efanelekileyo ekukhuliseni umntwana ophila kwi-Autism Spectrum Kuba zonke iinkcukacha eziyimfuneko kunye nokuqwalaselwa akunakubekwa ngokupheleleyo ukuze ancede ngokupheleleyo umntwana andise amandla akhe.
Izikolo zikarhulumente, njengezikolo zabucala zibonelela ngemfundo efanelekileyo kunye nolungiselelo lwentlalo lomntwana one-autistic. Nangona kunjalo, kunokubakho amakhonkco alahlekileyo okunceda umntwana. Akukho siqinisekiso sokuba izikolo zabucala zibhetele. Ngamnye kubo ujolise ekuncedeni umntwana akhule kuwo onke amabakala ayimfuneko obomi.
Ungajonga kwezi zihloko zingezantsi nazo!
I-35 + zeZikolo eziBalaseleyo zeAutism ePhambili yokuSebenza
Izizathu ezi-8 zokuba kutheni kufuneka ufunde malunga nokwahluka kunye nokubandakanywa
Ikholeji yaseNiagara eUnited States yaseMelika yoNcedo lokuFunda eCanada eCanada 2020
Post Previous:Izikolo ezili-13 eziBalaseleyo zeZidingo zaseFlorida
Okulandelayo Post:Iingcebiso ezi-5 zokuKhuthaza ukuFunda ngelixa uhamba